Home Wararka Dagaal Baltweyne ka Qarxay Saacado hortood.
Dagaal Baltweyne ka Qarxay Saacado hortood.
Wararka naga soo gaaraya Magalada beledweyne ayaa waxaa ay sheegayaan in dagaal xoogan uu ka socdo afaafka hore ee Madaxtooyada Gobolka Hiiraan, halkaasi oo ay dagan yahiin Madaxda Ugu horeeyso Maamulka Hirshabeellle.
Damaged ayaa waxaa dabada ka riixaya Villa Somaliya iyadoo uu MW Guudlaawe rabo in si caddaalad ah loogu tartano kuraasta oo ay soo baxdo cidda ay beesha kurisiga leh rabto.
Previous articleSafiirka Itoobiya ee Soomaaliya oo u muuqda inuu kamid noqday shaqaalaha Farmaajo
Next articleAl-Shabaab oo Weerar ku Qaadday Degaanno KENYA ah.
Laftagareen oo fuliyay amarkii Farmaajo dibna ugu laabtay Baydhabo